Ny Fifaninanana Bilaogy Shiliana: Ireo mpandresy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Septambra 2017 4:46 GMT
(Marihina fa tamin'ny 12 May 2006 no nanoratana ny lahatsoratra teny anglisy)
Bilaogera maherin'ny 2000 avy amin'ny firenena miisa 12 no nisoratra anarana tao amin'ny Lokan'ny Bilaogy Atina. Ireo bilaogera ihany no mpitsara voalohany, izay afaka nifidy ny bilaogy nankafiziny. Nisafidy ireo tsara indrindra avy amin'ny sokajy rehetra ireo mpitsara manokana.
Nanomboka ny blaoginy izay nambarany ho dingana faharoa teo amin'ny fiainany i “Dany Space” (ES), satria nodidiana vavony izy mba hampihenana ny lanjany, ary namoaka matetika momba ny fomba fijeriny manokana sy ny fanaraha-maso ara-pahasalamana miaraka amin'ny sary momba ny fivoarany isam-bolana. Nahazo ny vato betsaka indrindra izy.
“Afumhue” (ES), tanora Shileana iray monina ao Norvezy nandritra ny fito taona, no nandresy tamin'ny sokajy haibika. Lasan'i “Gamer Café” (ES) ny sokajin'ny Siansa sy Teknolojia .
Nomena an'i “Ventanas de Colores” (ES) ny sokajy Kolontsaina sy Zavakanto. Lasan'i “Juanelo” (ES) ny Bilaogy Manokana tsara indrindra izay nitondra ny tantara an-tsary hafakely.
“Iván Seisdedos” (ES) no nahazo ny sokajy politika,avy ao amin'ny faritra voalohany.
Mpamonjy voina miisa roa izay namoaka lahatsoratra tao amin'ny “Bomberos del Mundo” (ES) no nitondra nody ny loka bilaogin'ny mpanao gazety tsara indrindra. Azo jerena ao amin'ity bilaogy ity avokoa ny momba ny voina, ny hetsika ary ny vaovao iraisam-pirenena.
Hita ao amin'ny “Muga” (ES) ny olan'ny haivarotra malaza sy ny fahafantarana ny mpanjifa, ilay bilaogy izay nomena ny “Fanamarihana Manokana ” tao amin'ny fifaninanana.
Ny mpandresy tamin'ny ankapobeny dia ny “Plataforma Urbana” (ES), vondrona bilaogy iray izay mitatitra ny fanorenana an-tanàndehibe toy ny tranobe goavana, ny fandrindrana ny tanàndehibe, ary ny tetikasa an-drenivohitra ao Chile sy manerana izao tontolo izao. Nahazo ny sokajy vondrona bilaogy ihany koa ny “Plataforma Urbana” .